गर्मी को कपडा र जुत्ता भण्डारण को लागी5सुझावहरु बेजिया
गर्मी को कपडा र जुत्ता भण्डारण को लागी5सुझावहरु
टोय टोरेस | 09/09/2021 10:00 | घर
त्यहाँ गर्मी को अन्त्य सम्म मात्र केहि दिनहरु छन् र यो गर्मी को कपडा र जुत्ताहरु लाई टाढा राख्ने समय हो, केहि महिनाहरुमा एक नयाँ छुट्टी को लागी पर्खिरहेको छ। गर्मी को अन्त्य संग, यो समय को लाभ उठाउन को लागी हो अभ्यास टुकडी र ती सबै चीजहरु बाट छुटकारा पाउनुहोस् कि अब सेवा गर्दैनन्। किनभने एक राम्रो गर्मी को याद को उद्देश्य संग कपडा भण्डारण, मात्र अनावश्यक चीजहरु संग कोठरी भर्न को लागी नेतृत्व गर्दछ।
गर्मी को समयमा कपडा अधिक सजीलो क्षतिग्रस्त छन् र यो धेरै संभावना छ कि तपाइँ कपडा छ कि तपाइँ अब लगाउन जाँदै हुनुहुन्छ। एउटै जूता र अन्य विशिष्ट गर्मी को सामान को लागी जान्छ। जसरी यो सीमित स्थानहरुमा बस्नु सामान्य छ, सबै भन्दा राम्रो र healthiest कुरा ofतु को परिवर्तन को लाभ लिन को लागी हो नयाँ कुरा को लागी बाटो बनाउन। तपाइँको गर्मी को कपडा र जुत्ता भण्डारण को लागी केहि सुझावहरु को आवश्यकता छ?
1 कुनै भावना छैन, कुनै पश्चाताप छैन
1.1 तिनीहरूलाई टाढा राख्नु अघि लुगा धुनुहोस्
1.2 "भ्याकुम" झोला प्रयोग गर्नुहोस्
1.3 कीरा-प्रमाण sachets जोड्नुहोस्
1.4 जति चाँडो त्यति राम्रो
कुनै भावना छैन, कुनै पश्चाताप छैन
यो सामान्य छ केहि चीजहरु को लागी एक अनुलग्नक हो कि सम्झनाहरु लाई फिर्ता ल्याउन को लागी, विशेष गरी यदि उनीहरु लाई छुट्टी र गर्मी संग गर्नु पर्छ, जुन सामान्यतया साहसिक मौसम हो। तर एक वस्तु, वा यस मामला मा एक कपडा, के तपाइँ गर्मी याद गर्न सक्दैन। के अधिक छ, तिनीहरू हुन् चीजहरु छन् कि राखिएको छ र धेरै राम्रो कारण थाहा छैन को बिन्दुमा जम्मा.
तेसैले, यो सबै भन्दा राम्रो समय हो ती सबै चीजहरु बाट छुटकारा पाउन को लागी, भावनाहरु बिना र पछुताउनु को बिना। किनकि यदि दिन को अन्त्य मा उनीहरु तपाइँ एक पल को आनन्द को लागी सेवा गरीरहेछन्, उनीहरु पहिले नै आफ्नो कार्य पूरा गरीसकेका छन्। अब समय एक नयाँ मौसम को कपडा र जुत्ता को लागी नयाँ अनुभवहरु बाट भरीरहेछ भनेर कोठा बनाउन को लागी हो। त्यसोभए व्यवसायमा तल आउनुहोस् र यी उपयोगी सुझावहरु मा नोट लिनुहोस्.
तिनीहरूलाई टाढा राख्नु अघि लुगा धुनुहोस्
यो धेरै अल्छी हुन सक्छ किनकि कपडा फेरी महिना पछि धोईन्छ जब तपाइँ अर्को गर्मी को लागी उनीहरुलाई बाहिर निकाल्नुहुन्छ। तर यो तपाइँको लुगा सफा राख्न को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यो उनीहरुलाई सबै जाडो महिनाहरुमा सही स्थिति मा राख्नेछ। कीरा कपडाको आर्द्र क्षेत्रमा बढ्छ र कपडा को फाइबर बीच खाना पाउनुहोस्.
यदि तपाइँ एक न्यूनतम दाग संग कुनै कपडा भण्डारण गर्नुहुन्छ, तपाइँ पतंगहरु को तपाइँको गर्मी को कपडा बाट एक पार्टी फ्याँक्ने जोखिम चलाउनुहुन्छ। लुगाहरु जुन अनावश्यक छन्, सफा राखिएको छ, तपाइँ तिनीहरूलाई फेरि धुनु आवश्यक छैन। केवल ती चीजहरु जुन कहिले काहिँ प्रयोग गरीन्छ, जस्तै गर्मी को जैकेट, पूल तौलिया, स्विमिंग सूट वा केहि सफा छैन।
जुत्ता संगै यस्तै गर, आफ्नो स्यान्डल न धुने गरी नराख्नुहोस् किनकि उनीहरु क्षतिग्रस्त हुन सक्छन् र अर्को सिजन को लागी अनुपयोगी हुन। तपाइँको जुत्ता को तलहरु सफा गर्नुहोस्, उनीहरुलाई बाहिर सफा गर्न को लागी एक ब्रश को उपयोग गर्नुहोस्, र राम्रो संग insoles सफा गर्नुहोस्। यस तरीकाले उनीहरु अर्को गर्मी सम्म सही रहनेछन्।
"भ्याकुम" झोला प्रयोग गर्नुहोस्
यो कपडाहरु कि भण्डारण गर्न को लागी एक झोला हो एक नोजल जहाँ तपाइँ भ्याकुम क्लीनर राख्न सक्नुहुन्छ र भित्र बाट हावा अवशोषित गर्न सक्नुहुन्छ। यी झोलाहरु धेरै व्यावहारिक छन् किनकि उनीहरु धेरै झोला को आकार घटाउँछन् र कुनै पनी कुना मा सजीलो संग सजीलो छन्। तपाइँ उनीहरुलाई ठूला पसलहरु र यहाँ सम्म कि बजार मा पाउन सक्नुहुन्छ। तिनीहरू धेरै सहज, व्यावहारिक र सस्तो बर्तन, तपाइँ के खोज्दै हुनुहुन्छ को लागी एकदम सही छन्।
कीरा-प्रमाण sachets जोड्नुहोस्
कीराहरु लाई तपाइँको गर्मी को कपडा र जुत्ता को बीच मा proliferating बाट रोक्न को लागी, यो कीरा प्रुफ झोला राख्न को लागी धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाइँ यो गर्न बाट बच्न सक्नुहुन्छ किनकि यो तपाइँको कपडा मा एक बलियो गन्ध छोड्छ र कहिले काहिँ हटाउन गाह्रो हुन्छ। तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ यदि तपाइँ ग्रीष्मकालीन कपडा लाई क्षति रोक्न चाहानुहुन्छ। आज त्यहाँ पहिले को तुलना मा अधिक आरामदायक विकल्प छन्। उनीहरुसंग त्यस्तो कडा गन्ध छैन, न त उनीहरु पहेंलो लुगा लगाउँछन्, तिनीहरूलाई प्रयोग गर्नुहोस् र तपाइँ यसलाई पछुताउनुहुन्न।
धेरै शहरहरु मा यो अझै गर्मी को अन्त्य पछि तातो दिन हो, तर अलमारी को परिवर्तन गर्न समय मा ढिलाइ गर्नु पीडा लम्बाउनु बाहेक अरु केहि छैन। यो कार्य थकाऊ छ र धेरैजसो मानिसहरुको लागी समय को एक लगानी हो कि उनीहरु लिन चाहँदैनन्। तर यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ कोठरी मा व्यवस्था को बनाए राखन को लागी, चीजहरु संगठित संग संगठित छ र समय को बचत हुन्छ जब प्रत्येक दिन को लागी तयार हुदै छ। पल ढिलो नगर्नुहोस् तपाइँलाई चाहिने सबै चीज तयार गर्नुहोस् र तपाइँको कपडा भण्डारण गर्न यी चालहरु को उपयोग गर्नुहोस् र गर्मी को जुत्ता।
लेखको पूर्ण मार्ग: बेजिया » घर » गर्मी को कपडा र जुत्ता भण्डारण को लागी5सुझावहरु
लिम्फेटिक ड्रेनेज के हो र यो के को लागी हो?